Ihe ị ga-ahụ na Zurich | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Zurich
Obodo kacha ibu na Switzerland bu Zurich, ya aku na uba, ego na mahadum center. Nwere ike iru ebe ụgbọ elu, n'okporo ụzọ ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè si ọtụtụ obodo ndị ọzọ na Europe.
Zuricht nwere ọtụtụ ọmarịcha na ọ bụ ezie na taa ọ na-akwado ụfọdụ ịdebe aka n'ihi ọrịa Covid-19, n'oge ọkọchị a, ọ na-anabata ndị ọbịa. Ka ahụ taa ihe ị ga-ahụ Zurich.
2 Ihe ị ga-ahụ na Zurich
Dị ka anyị kwuru n'elu, ọ bụ obodo kachasị ukwuu na Switzerland Confederation, Mana ekwesighi imeghari ya na isi obodo ya bu Bern. O sitere na Rom ya mere enwere akụkụ ochie na nke dị ugbu a karị, nke mere ka ọ maa mma na ọdịiche ya.
Nke ochie Turicum Ndị agha Rome tọrọ ntọala ya ma kwenyere na n'ogo ya enwere ndị bi na 300. Alaeze Rome lara azụ n'ihe dị ka AD 401 ma site na mgbe ahụ, ntọala ahụ toro ogo, nke mere na kwupụta na XIII narị afọ ọ na-ama-atụle obodo.
Na Etiti oge gboo Zurich nwere mgbidi na ebe ewusiri ike, ebe obibi ndị mọnk na ebe obibi ndị mọnk nke mechara mee obodo ahụ etiti esemokwu okpukpe dị n’etiti ndị Katọlik na ndị Protestant. Agha a ga - emeri nke abụọ, kemgbe ahụ ọ bụ okpukpe a ma ama na mpaghara ahụ.
Zurich dị n’akụkụ osimiri Limmat, nke dị kilomita iri atọ site n’ugwu Alps, na ugwu ndi mara mma gburugburu. Obodo ochie ya dị n'ugwu dị nro n'akụkụ osimiri, Lindehof. Ọrụ nke atọ nke ịkpata ego na Zurich bụ njem nlegharị anya. Kwa afọ nde ndị njem 9 na-abịa mara amara ya, ya mere rịba ama:
Lindhof bụ obodo ochie ya mere ọ bụ ebe e gosipụtara ọtụtụ oge dị mkpa na ndụ nke obodo-ukwu ahụ. Lee ihe roman Fort na narị afọ nke itoolu obí eze nke Charlemagne nwa nwa, ọmụmaatụ. Taa, mpaghara a bụ ebe dị jụụ na udo ebe ị ga-aga na Grossmünster Church, Halllọ Nzukọ Obodo, ọdụ mmiri, mahadum ma ọ bụ Switzerland Federal Institute of Technology ...
La Chọọchị Grossmünster ọ bụ akara ngosi obodo. Dabere na akụkọ mgbe ochie Charlemagne chọpụtara ili ndị sentị zurich, Felix na Regula, wee wuo ụlọ ụka ebe ahụ. N'ebe a, Ndozigharị malitere na narị afọ nke XNUMX. Nwee a iko mara mma banyere Sigmar Polke, a romanesque kporo, windo ukwe bụ site Giacomettu na ebube ọnụ ụzọ ọla Ọ bụ Otto Múnch rụrụ ha.
Niederdorf Ọ bụ akụkụ nke obodo ochie ahụ ma dịkwa ebe Oberdorf bi. Bụ a mpaghara ije ụkwụ na-agba ọsọ yiri Limmatquai, na ọtụtụ ụlọ ahịa na alleys oghe n'ehihie, n'abali o bia di ndu dika Abalị district ya na ndị na-eme ihe ngosi na ụlọ mmanya.
Lọ ụka kacha ochie n’obodo ahụ bụ Peterka St. Peter. O nwere ntọala site na narị afọ nke XNUMX ma taa bụ ili nke onye isi obodo mbụ nke Zurich, Rudolf Brun. Nwee a oge elekere nke 8.7 mita dayameta na mgbịrịgba ise malitere site na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu, nke kachasị ibu dị tọn isii ...
N'aka nke ọzọ, otu n'ime kasị mara mma na akụkọ ihe mere eme n'okporo ámá bụ Augustinergasse. Warara na ọmarịcha, nwere ọtụtụ ụlọ echekwara nke ọma yana windo mara mma, n'ọnụ mmiri windo, na-enye anyị ohere ịhụ obodo site na akụkọ ntolite ya.
Okporo ámá ahụ jikọtara okporo ụzọ Bahnhofstrasse na narị afọ nke XNUMX nke Gothic-style nke Augustine Church, na-aga n'ihu na Peterhofstatt Square, na-abụghị St Peter's Church, na obodo ochie.
bahnhofstrasse Ọ bụ okporo ámá a ma ama, a gbamgbam kere n'oge na-adịghị mgbe na-ewu nke Zurich Train Station. Otu narị afọ na ọkara gara aga enwere mmiri, ma taa n'okporo ámá na-ejikọ ọdọ mmiri na ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita na ọkara. Nwere boutiques, ngalaba na-echekwa, na nke ahụ mere na ọ bụ a nnọọ ewu ewu.
Ikwerre ọ bụ, maka akụkụ ya, obi nke Bahnhofstrasse. Ọ bụ nrutu n’etiti ọdọ na obodo ochie ahụ ma bụrụkwa ebe etiti ego. A maara mpaghara ahụ dị ka Säumärt, ahịa efu, n'ihi na na narị afọ nke XNUMX, e nwere ahịa ehi. Ka oge na-aga, na narị afọ nke XNUMX, a degharịrị Neumarkt na ọkara narị afọ ka e mesịrị nye aha ugbu a, Paradeplatz.
Rennweg Ọ bụ okporo ámá ọzọ dị na Zurich. A okporo ámá ochie na nke a ma ama nke bụbu okporo ụzọ awara awara na obodo. Gbagogo site na Bahnhofstrasse ma ka nwere ọnụ ụzọ ámá ochie, Rennwegtor, nke bụ akụkụ nke mgbidi ndị ochie. Ọ bụ nke abụọ kacha mkpa ịzụ ahịa n'okporo ámá na ọ bụ onye ji ụkwụ aga n'ihi ya ọ na-akpọ ndị na-atụrụ ndụ ije.
Schipfe ọ bụ maka ya otu n’ime ógbè kacha ochie na Zurich ma gbaa ọsọ n'okpuru Lindenhof. A na-akpọ ya dị ka nke a maka ntụnyere schupfen, inupụ, n’ihi na ndị ọkụ azụ̀ na-eji ụgbọ mmiri ha aga ma si n’osimiri ahụ asọ. Na narị afọ nke XNUMX ọ ghọrọ etiti ụlọ ọrụ silk ma ka dị taa ọ bụ ebe mgbaba maka ndị na-ese ihe na ndị omenkà. Echere m, ị nwere ike ịzụta ihe ncheta mara mma.
N'ikpeazụ, anyị ga - eme gaa na Central Police Station n'ihi na ọ na-edebe akụ: ihe osise nke Augusto Giacometti sere. Thelọ ahụ bụrụbu ụmụ mgbei mana na 20s nke narị afọ nke XNUMX, etinye ya ọnọdụ. Maka nke a, a kpọrọ asọmpi na Giacometti meriri site na atụmatụ ya siri ike na-acha uhie uhie na ocher. Ọrụ ya wee mee ka elu ụlọ na uko ụlọ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ahụ mma.
Ekwenyere m na e nwere ọtụtụ ụzọ isi tụlee obodo: ịga ije n'okporo ámá ya na-enweghị isi ma ọ bụ ịrịgogo dị elu iji nye ya panoramic echiche. Ọ dabara nke ọma, Zurich na-enye ohere abụọ.
Maka echiche anyị nwere ike ịrịgo na Ulo elu Freitag, rie ihe na Panorama Ogwe Jules Verne, kwụsị na Lindehof ramparts, gbagoo na Karlstrum, otu n’ime ụlọ elu abụọ nke Zurich nke Chọọchị Grossmünster, ma ọ bụ jiri otu awa si n’etiti gafere, gafere Wipkingen na Höngg rịgoro na ugwu Käferberg.
Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ dị elu, kedu maka otu sawụna na teres? Nke ahụ bụ ihe Thermalbad & Spa Zurich bụ maka, n'ime ihe ochie ochie. Mmiri ahụ dị ọkụ, nke nwere mineral na ọnọdụ obi ụtọ dị n'agbata 35 na 41 ºC. Maka CHF 36 ị nwere ịsa ahụ ọkụ na maka CHF 60 ị nwere ahụmịhe ịsa ahụ Irish-Roman spa.
O doro anya, na ihe a niile ị nwere ike itinye ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọbụna ụgbọ mmiri, n’akuku mmiri Osimiri. Ihe niile ga-amasị gị, ị ga-ahụ Zurich n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Zurich » Ihe ị ga-ahụ na Zurich